कलेजोको सफल प्रत्यारोपणपछि टिचिङबाट घर फर्किए कञ्चनपुरका रावल, २८ वर्षीय ज्वाइँले दिए पुनर्जीवन – Health Post Nepal
कलेजोको सफल प्रत्यारोपणपछि टिचिङबाट घर फर्किए कञ्चनपुरका रावल, २८ वर्षीय ज्वाइँले दिए पुनर्जीवन
२०७६ साउन १७ गते १५:२५
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा सफलतापूर्वक कलेजो प्रत्यारोपण गराएका दोस्रो बिरामी दीपेन्द्रसिंह रावल शुक्रबार घर फर्किएका छन् । दुई साताअघि कलेजो प्रत्यारोपण गराएका रावल स्वस्थ भई डिस्चार्ज भएपछि बिरामी र बिरामीका आफन्तसँगै प्रत्यारोपण टोलीको नेतृत्व गरेका सर्जन डा. रमेश भण्डारीसहित टोलीमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी निकै खुसी र उत्साहित देखिएका छन् । नातामा ज्वाइँ पर्ने व्यक्तिबाट कलेजोदान पाई पुनर्जीवन पाएका रावल पूर्वस्वास्थ्यकर्मी हुन् ।
३ साउनमा भारतको नयाँदिल्लीस्थित फोर्टिस हस्पिटलका वरिष्ठ सर्जन विवेक बिजको मार्गदर्शनमा अंगप्रत्यारोपण सर्जन डा. रमेश भण्डारी नेतृत्वको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले रावलको सफलतापूर्वक कलोजो प्रत्यारोपण गरेको थियो । डा. भण्डारीका अनुसार रावलमा कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या नदेखिएपछि उनलाई शुक्रबार डिस्चार्ज गरिएको हो । रावललाई २८ वर्षीय ज्वाइँ पर्ने व्यक्तिले कलेजो दिएको र उनको यसअघि नै डिस्चार्ज भइसकेको डा. भण्डारीले हेल्थपोस्टलाई जानकारी दिए । बिरामीले स्वास्थ्यलाभ गरेर घर फर्किएसँगै डा. भण्डारीले प्रत्यारोपणमा सघाएका भारतीय चिकित्सक डा. बिजलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिएका छन् ।
डा. भण्डारीका अनुसार रावलमा कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या नदेखिएपछि उनलाई शुक्रबार डिस्चार्ज गरिएको हो । रावललाई २८ वर्षीय ज्वाइँ पर्ने व्यक्तिले कलेजो दिएको र उनको यसअघि नै डिस्चार्ज भइसकेको डा. भण्डारीले हेल्थपोस्टलाई जानकारी दिए ।
प्रत्यारोपणपछि दुई साताको अस्पताल बसाइपछि स्वास्थ्यलाभ भएका रावललाई शुक्रबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको हो । यसअघि अस्पतालले १७ जेठमा डा. भण्डारीकै नेतृत्वमा ५८ वर्षीय पुरुषमा कलेजोको पहिलो सफल प्रत्यारोपण गरेको थियो । त्यतिवेला डा. भण्डारी नेतृत्वको टोलीलाई भारतकै एपोलो अस्पतालको विशेषज्ञ चिकित्सक टोलीले सघाएको थियो भने ३३ वर्षीय छोरीले कलेजो दान गरेर बुबालाई पुनर्जन्म दिएकी थिइन् ।
पहिलो प्रत्यारोपणको करिब डेढ महिनापछि दोस्रो प्रत्यारोपण गरेको त्रिवि अस्पतालले सुरुवाती दिनमा महिनामा कलेजोको एउटा प्रत्यारोपण गर्ने योजना बनाएको छ । भविष्यमा अस्पतालले कलेजो प्रत्यारोपणलाई दिने गतिबारेको जिज्ञासामा डा. भण्डारीले भने, ‘अहिले सुरु–सुरुमा महिनामा एउटा प्रत्यारोपण गर्ने लक्ष्य हो, दोस्रो सफलतासँगै तेस्रो प्रत्यारोपणका लागि बिरामी तयार पारेका छौँ । ८–१० वटा प्रत्यारोपण गरेपछि महिनाको दुईवटासम्म गर्ने योजना छ ।’ ८–१० वटा प्रत्यारोपण नगरुन्जेल विदेशी चिकित्सक टोलीको सहयोगलाई निरन्तरता दिइने डा. भण्डारीको भनाइ थियो ।
भविष्यमा अस्पतालले कलेजो प्रत्यारोपणलाई दिने गतिबारेको जिज्ञासामा डा. भण्डारीले भने, ‘अहिले सुरु–सुरुमा महिनामा एउटा प्रत्यारोपण गर्ने लक्ष्य हो, दोस्रो सफलतासँगै तेस्रो प्रत्यारोपणका लागि बिरामी तयार पारेका छौँ । ८–१० वटा प्रत्यारोपण गरेपछि महिनाको दुईवटासम्म गर्ने योजना छ ।’